Ngwakọta maka USB
Ndị Pharma Intermediates
Vitamin na Amino acid
Akụkọ banyere Azụmaahịa
Labeyond Chemicals Co., Ltd. bụ onye na-ebubata ngwaahịa na China maka ndị mmekọ nke API na ndị na-etiti, Cosmetic Active Efrata, vitamin na chemicals, wdg.
Na mbụ ụlọ ọrụ na-enye ndị na-azụ ahịa anyị ihe oriri na ndị ahịa nke ndị ahịa na India, azụmaahịa ahụ toro ma ndị ahịa na-ele anya ịzụta ọtụtụ ngwaahịa dị iche iche n'aka anyị, ma were Labeyond dị ka onye mmekọ na-eme nri na China. Ka oge na-aga, azụmahịa anyị gbasaa na mba ndị ọzọ ma ọ bụ ahịa dị ka USA, Mexico, Brazil, Europe na Africa.
Elọ nyocha nwere mmekọrịta dị ogologo oge na-adịgide adịgide yana ihe karịrị 50 na-eduga ndị nrụpụta na China, ma guzobe saịtị mmepụta 3 na Jiangsu, Zhejiang na Sichuan, China.
OTU KWESOPR IN KWESTR SU KWESTR.
Elọ nyocha na-enye otu nkwụsị nke mmiri ọgwụ, iji chekwaa ọrụ abụọ na mmefu maka ụkpụrụ anyị. Anyị na-arụ ọrụ na-agbakwunye uru ka ndị ahịa na aka nke ọzọ.
Anyị kwenyere na ịdị mma bụ ihe niile. Ọ bụ otu ihe kachasị mkpa na mkpebi anyị niile, site na isi mmalite anyị zụtara, otu anyị siri nyefe gị ha.
IZUPU N’ỌZỌ KACHIGARA!
On-nnyefe bụ mgbe isi nchegbu anyị side.We-arụ ọrụ na ndị ọzọ ọkachamara logistic mmadụ, na anyị mkpara na-24-awa na-ekiri na-aga.
A ghaghị ịkwanyere CHEMISTRY ùgwù
Anyị na-asọpụrụ Chemistry, maka ihe anyị hụrụ n'anya. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ anyị bụ Chemistry metụtara ndabere. Anyị na-arụ ọrụ nke ọma na ụlọ ọrụ kemịkalụ iji gboo ihe ị chọrọ.
Akwụkwọ Akụkọ Business
Lee ha niile
RM1317 Zhongnan Bldg. A, Nke 18 Zhonghua West Road, Ganjingzi Dist. Dalian-116031, Liaoning Province, China
Kpọọ anyị ugbu a: + 86- (411) -86505955
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ ozi gị na anyị ga-kpọtụrụ gị n'ime 24 awa.
Zipu ase ebe a!